Fototra sandaly sy torohevitra manome rano mamy ho an'ny COVID-19
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Fototra sandaly sy torohevitra manome rano mamy ho an'ny COVID-19
Ireo olona sahirana miatrika ny olana mifandraika amin'ny COVID-19 dia afaka mangataka fanampiana amin'ny Internet izao ao amin'ny Sweet Water Foundation. Ny fanampiana dia natomboky ny Sandals Foundation ary ny Sweet Water Foundation hanamafisana ny fahaizan'i Grenada manampy amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra ara-nofo, dia manitatra ny serivisy ho an'ny olona rehetra mandritra io fotoana tsy nisy toy izany tamin'ny areti-mandringana manerantany.
"Mandritra ny COVID-19, mazava ho azy, manao ny anjarantsika izahay hanampiana ny firenena," hoy ny fanazavan'ny manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana ny zaza sy ny talen'ny Foundation Sweet Water Foundation, Dr. Hazel Da Breo, ho an'ny The Grenadian Voice. Nanampy izy fa hatramin'ny COVID-19, manodidina ny 50% ny antson'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny COVID-19.
Dr. Da Breo dia nanamarika fa na dia napetraka tany am-boalohany aza ny fanampiana mba hiompana amin'ny fiarovana ny zaza, dia nisy antso voaray avy amin'ny tanora, tanora, ary ny olon-dehibe mitady valiny momba ny olana eo amin'ny lahy sy ny vavy sy ny firaisana ary ny fifandraisana.
"Nanampy ireo mpanjifa manana fiheveran-tena hamono tena koa izahay," hoy izy ary mampatsiahy fa ny tagline dia "Izay fotoana mety amin'ny antony rehetra."
DaBreo mpanorina dia nitatitra fa “Ny fampiasa WhatsApp no ​​be mpampiasa indrindra. Tsy vitan'ny hoe manana mpiantso vaovao isika, fa ny mpanjifa taloha kosa dia nijanona niaraka tamintsika hatramin'ny voalohany tao anaty serivisy mpanolotsaina an-tserasera feno sy tsiambaratelo. ”
Nizara izy fa tamin'ny telovolana voalohany ho an'ny taona 2020, fifandraisana 1,185 teo anelanelan'ny WhatsApp, hafatra, mailaka ary telefaona no voatanisa.
Heidi Clarke, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Sandals Foundation, dia manantena fa hanampy ny serivisy amin'ny Sweet Water.
“Rehefa voatery mijanona ao an-trano ny fianakaviana manerantany, dia fantatray fa ity zava-misy vaovao ity dia afaka miteraka fihenjanana bebe kokoa ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe ka miteraka fitomboan'ny tranga fanararaotana ara-pihetseham-po sy ara-batana mihitsy aza. Ny ekipa ao amin'ny Sweet Water dia nofanina tamim-pahaizana, ary raisinay ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana Grenadianina hanatona raha mila fanampiana izy ireo hamakivaky izao fotoan-tsarotra izao. Miaraka isika dia afaka mifanampy amin'ny fihazonana fahasalamana ara-tsaina tsara sy hampisy fifandraisana tsara kokoa, "hoy i Clarke.
Ny toeram-pitsaboana Sweet Water Foundation dia ao amin'ny Wave Crest Apartment, Grand Anse, St. George. Mpanolotsaina voaofana miisa 3 no miasa ao aminy, izay samy mamaly ireo toeram-pifandraisana isan-karazany. Misy ihany koa ireo mpitsabo 2 mahita ny mpanjifa mifanatrika.
Ny Sweet Water Foundation Child Helpline dia niditra ho mpikambana ao amin'ny Child Helpline International (CHI), tambajotra maneran-tany misy fanampiana miisa 181 ho an'ny zaza ao amin'ny firenena 147 ary hiasa amin'ny fomba mitovy amin'ireo helpline hafa ao anaty tambajotra.
Nandritra ny telopolo taona mahery, ny Sandals Resorts International dia nandray anjara tamin'ny famerenana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ireo nosy antsoiny hoe fonenany. Ny fananganana ny Sandals Foundation dia nanjary fomba voarindra hanovana fanovana tsara eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny fiaraha-monina ary ny tontolo iainana. Androany, ny Foundation dia tena fanitarana filantropika ny marika - sandry manaparitaka ny filazantsaran'ny fanantenana manentana eraky ny faran'ny Karaiba. Ho an'i Sandals, ny fanantenana mitaona fanahy dia mihoatra ny filozofia fa antso ho amin'ny hetsika.
Fanampiana: 537-7867 na 800-4444 na mailaka [email voaaro]
Hyatt, Marriott, Bookings.com dia haino aman-jery sandoka amin'ny famandrihana hotely any Hawaii
Turkish Airlines miverina any Russia